Awama-Soap "Disney": ohlwini ivumelane yonke akuthandayo
Ama-Movie, Channel uchungechunge "Disney" (uhlu ngezansi) abathanda kokubili abadala kanye nezingane. isiteshi izilaleli - ikakhulukazi intsha, ngakho inkampani kuthatha iningi chungechunge, ukugxila akuthandayo zabo. Nokho, umlando akuyona banal futhi ngempela ezithakazelisayo.
Uhlu kuvula omunye wemisebenzi kunazo owaziwa - "Hana Montana" Sitshela indaba ingane Miley Stewart, ophila ukuphila okumatasa kakhulu. Emini lokhu kuphazanyiswa kakhulu ukuthi akekho kuyinto yesikole abavamile, futhi kusihlwa - umculi odumile.
Mayelana ukuphila okumbaxambili wentombazanyana uyazi umndeni wakhe kuphela nabangane abaseduze. Miley ngesinye isikhathi kunzima kakhulu ukuba silinganisele ngasonqenqemeni. Ngenxa yalokhu, ngezinye izikhathi kukhona okuningi nokungaqondi nezimo iyadida.
Ayikho ezingadumile kakhulu TV ewuchungechunge, Kwenzekani ku-isilinganiso ziyingxenye 'uHana Montana. "
Umnqopho we ukuphila Violet - a intombazane lomkhaya ocebile. Ngemva kokufa kukanina, i diva opera, uyise ukuvakasha intombi wawukwenqabela ukwenza umculo. Violetta endlini yakhe kunjani isiboshwa yangempela: kuwo akukho abangane, akukho mkhaya. Nokho, izinto zashintsha ngemva kwalokho wathuthela Buenos Aires. Violetta ngasese uya esikoleni umculo "Studio 21", futhi ukuphila kwakhe kwenza ube esejika. abangane okusha, uthando, futhi izimbangi kungukuthi bephoqeleka ukuba balinde.
"Inja nge Blog"
I "Disney" uchungechunge elandelayo, ungakhetha wokubuka emndenini. Uhlu iholwa ethandwa sitcoms indaba mayelana inja ku isidlaliso Stan.
ukuphila Hard futhi Tyler James Everi Dzhennings. Bona - stepbrother futhi stepsister futhi njalo esimweni impi abandayo. Ukuze kukwenza abangane izingane, inhloko umndeni kuletha ekhaya inja. Kepha alazi ukuthi kubonisani. Phela, Stan akuyona inja elula, futhi ukukhuluma! Ngaphezu kwalokho, yena unalo intshisekelo: uyakwazi ukuzibamba blog yakhe siqu ezokwenza ukuthumela amanothi wakho ngabantu. Avery Tyler kuyodingeka bayakhohlwa umbango ukugcina isilwane imfihlo.
"Wizards ka Waverly Indawo"
Awama-Soap "Disney" (kulolu hlu ubonisa) uthando kuthatha izibukeli zibe sezwe umlingo.
Uma uthi nhlá, ozala Rousseau zingezona ezibonakalayo: umama, ubaba, futhi abathathu izingane-intsha. Kodwa lokhu ukubonakala sobala kuphela. Izingane Rousseau, lo mbhangqwana okungukuthi hhayi ejwayelekile, ngisho kakhulu engavamile: Zikhona ngempela Gibhithe. Yikuphi ngaphezu esikoleni evamile amahora kudingeka ukuhlafuna kakhudlwana futhi granite isayensi imilingo. Justin magic iza kalula, ngoba bekunzima. Alex kusukela ukusetshenziswa ezingasebenzi umlingo sonke isikhathi ingena enkingeni, futhi Max - kulandwe encane kunawo wonke - nimane nje anifuni ukufunda okwengeziwe, futhi iBhayibheli lihlukile.
Okuqukethwe izimpilo zomkhaya into eyodwa kuphela: kuphela umuntu wabantwana bakwa uzokwazi ukugcina amakhono abo.
Izinganekwane ezikhuluma ngabantu intsha esasebenza. Awama-Soap "Disney" uhlu isiteshi izindaba efanayo njalo.
Ziyakwazi amawele, kodwa kuhluke ngokuphelele. Liv ufuna ukunqoba Olympus inkanyezi futhi enza konke okusemandleni akhe ukuze career yakhe. Maddy akanandaba udumo impumelelo, yena ufuna ukuxhumanisa esizayo zabo basketball, edlala kahle. Ngemva ukuqopha, Liv ebuyela ekhaya, futhi manje amantombazane ukufunda ukuzwana nomunye.
Opopayi: "Disney" uchungechunge (uhlu)
Studio "Disney" liyaziwa opopayi ayo amahle, ukuze anqobe inhliziyo ezingaphezu kweyodwa. Ngaphezu yobude obugcwele amafilimu inkampani ukhiqiza uchungechunge evumela uhlale isikhathi eside elinezinhlamvu abawuthandayo.
Awama-Soap "Disney" (uhlu kuqinisekisa ke) Kunzima ukucabanga ngaphandle entsha Lion King nomkhaya wakhe. Le indaba kuthatha ababukeli ezweni Simba yebhubesi ukuzidela indodana yakhe encane - cute ingonyama cub Kioni.
Nakuba lo dade umdala Chiara ilungiselela ukuba abe indlovukazi esizayo futhi lapho usukwazi ukudlala kahle zonke ilungelo ukwenza kanjalo, nomfowabo omncane ekhashelwa nichegonidelanyu esibusisekile noma ububi. Kodwa ngolunye usuku lapho le ngxabano izimpisi e Kioni kuvula sipho - ukubhonga anamandla. a ukugwavuma okunjalo kusho ukuthi ingonyama ukulungele abe wasemuva bokuziqhenya imingcele futhi kumelwe ukuqoqa esitokisini yabo. Kunalokho, okungcono Lions Kion ukuhlanganela iqembu labangane bakhe, futhi manje gang kuyodingeka ukuvikela umbuso.
Ngo twins oneminyaka engu-12 ubudala Dipper futhi Thuli pins ayehlela kakhulu ehlobo. Nokho, awayona ezimiselwe abe ngokoqobo - abazali zithunyelwe izingane ehlobo kuya omkhulu-umalume Sam e encane edolobheni lase-Oregon. Gravity Falls kwenzakala akunjalo ezimbi njengoba okwamanje navoobrazhali, futhi izingane waqala kancane ukujwayela. Nokho, umbono wokuqala kwaba okukhohlisayo.
Uma Dipper uthola in idayari ehlathini kothile wayifunda, izingane uqaphele ukuthi babe endaweni engajwayelekile. Kwaqale kwabonakala epholile futhi kumnandi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi baqala ukuqaphela izinto ezahlukene emangalisayo. Hlangana izipoki, Zombies, noma izihlahla ngezinyawo zabo abazi Ubonakala okungaphezu kwemvelo. Nokho, lokhu akukhona izimfihlo eyinhloko Gravity Falls ...
"Lady Bug futhi Cat Super"
Iziphi ezinye ezithakazelisayo uchungechunge isiteshi "Disney"? Uhlu enwetshiwe enye indaba emangalisayo opopayi.
Paris usengozini ofayo: edolobheni wawudla izindwali ne izimvemvane amnyama ukuthi noma imuphi umuntu ibe supervillain. Ukuvikela abahlala ukuza namaqhawe ngubani empilweni yangempela - abafundi abavamile. Nokho, Marinette futhi Adrian ngisho nokuwabona ukuthi singobani nomunye kweqiniso, naphezu kweqiniso lokuthi le ntombazane othandweni-Adriana, futhi ukujabulela oluyimfihlakalo esesabekayo Lady Bug. Ingabe guys bhekana abaphikisi esiyingozi futhi ngiqonde imizwa yabo lomatima kangaka?
Katya Osadchaya: Biography, empilweni yakho
"Khumbula, uthando lwami": nabalingisi ka melodrama Turkish
Vladimir Pozner. Biography Posner, empilweni yakho, unkosikazi, umndeni, izithombe
Umuthi 'Hepa-Merz'. Yokusetshenziswa
Jump High - umbukwane elithakazelisayo
Khona-ke ungakwazi abeke strawberry? Hlobo luni inhlabathi uthando strawberry? Indlela ukutshala strawberry entwasahlobo?
Solanum Dulcamara. Nightshade (berry) - isithombe
I metal conductive kakhulu emhlabeni